Ecommerce Yemukati Yekushambadzira Maitiro e2017 | ECommerce nhau
Susana Maria Urbano Mateos | | Kutengeswa kweIndaneti, Kushambadzira kwenhare
Kune ino inotevera 2017, zvirimo zvicharamba zviri seimwe yeiyo zvekushambadzira maitiro inonyanya kukosha kumabhizimusi e-commerce. Tichaona vatengesi vachitarisa zvakanyanya kugadzira vhidhiyo yezvinyorwa, nharembozha, kusimudzira zvemukati, uye kunyanya kutora mukana wehunyanzvi. Tichataura zvishoma nezve iwo makuru pazasi Ecommerce zvemukati zvekushambadzira mafambiro e2017.
1 Zvemukati Kushambadzira Maitiro eEcommerce 2017
1.1 Mavhidhiyo anova akakosha
1.2 Mafomu anoenderana nefoni
2 Wedzera mukudyara kwemukati
3 Uchenjeri hunobatsira
Zvemukati Kushambadzira Maitiro eEcommerce 2017
Mavhidhiyo anova akakosha
Izvi zvinonyanya kuitika tichifunga kuti vechidiki vari pakati pemakore gumi nemasere kusvika makumi matatu nemana vanoratidza yakasimba sarudzo yevhidhiyo yedhijitari uchienzaniswa neterevhizheni yechinyakare. Izvo zvinozivikanwa zvakare kuti ingangoita 35% zviuru zvemireniyoni vachiri kuda kutarisa YouTube mavhidhiyo kana ichienzaniswa ne18% avo vanofarira mainstream TV. Izvo zvinototarisirwa kuti kusvika 2017, mavhidhiyo anozove akakurisa nzira kune makuru ecommerce mashandiro.
Mafomu anoenderana nefoni
Mu2017, pakati pe65 uye 75% yeese ekushandisa kweInternet ichagadzirwa kubva nharembozha. Naizvozvo zvichave zvakajairika kumakambani e-commerce kuti atarise pane mamwe mafomati ane hushamwari zvemukati. Izvi zvaizoreva zvakare kushandiswa kweanokurumidza mapeji enhare kana kugadzirwa kwe mafoni ekushandisa.
Wedzera mukudyara kwemukati
ari Ecommerce bhizinesi Ivo vatoona zvemukati kushambadzira sekukosha pakubudirira kwavo. Kuvimba uku kunofanirwa kushandura kuve kuwedzera kwete chete muchizvarwa, asiwo mukudyara kweiyo zvemukati zvekushambadzira. Kunyanya, tichave tichiona hukuru hukuru mukusimudzira zvemukati zvinogadzirwa.
Izvo zvakare mukana wekuti vakawanda Zvitoro zveEcommerce tanga kuyedza neAI-inogadzirwa zvemukati muna2017. Izvi zvinogona semuenzaniso kuyedza kuburitsa tsananguro yechigadzirwa kubva pane rondedzero yezvigadzirwa zvigadzirwa. AI inogona kutora mafomu akati wandei zvine hukama neiyo zvemukati kushambadzira, senge mushanduro shanduro, kunyora kufanotaura kana zvakare iro chizvarwa chemunhu akasarudzika zvemukati chiitiko.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Kushambadzira kwenhare » Ecommerce zvemukati zvekushambadzira mafambiro e2017
Vechidiki vatengi vari kutyaira Ecommerce muIndonesia